Kusukela isimo lapho kuthé iPad, wabhekana cishe njalo electronic igajethi umsebenzisi. Futhi nakuba ibekwe njengoba idivayisi enokwethenjelwa kakhulu, nakuba, futhi inkinga enjalo kwenzeka. I Onjiniyela zithi kuthé iPad ngenxa yezizathu ezahlukene.
Ukuphathisa nochwepheshe bezamabhizinisi
Thola kubo abasebenzisi ngisho abanolwazi cishe kungenakwenzeka. Kahle ukuxilonga inkinga kungaba kuphela balukhulume yesikhungo sesevisi oqeqeshiwe. Umsebenzisi ekhaya bangagcina ngokuzama nje kabusha igajethi yakho, wababuyisela ifektri, futhi ngaleyo ndlela uqede ngisho inkinga. Nokho, uma-iPad ivuliwe futhi uma lalingaphezu, kufanele reflash. Alone it is hhayi Kunconywa ukuba wenze lokhu inqubo ngoba ungakwazi sina kulimaze iyunithi. Kungcono ukuphathisa kule ndaba njengoba okuyinhloko. Kubalulekile ukuphawula ukuthi i-tablet efanayo kusukela Apple kuyinto enzima Sakhiwo sangekhatsi yokuthi umsebenzisi ongenalwazi akubizi lutho ngesikhathi elungisa ngokonakalisa ke okunye. Ngakho-ke, wesithupha: kuthé iPad - zama ukuqala kabusha. Uma inkinga iqhubeka - kuyadingeka, xhumana isikhungo service.
Woza futhi balungisa?
Ngokuvamile, lapho igajethi kuthé Isizathu akusho usebenze ngokujwayelekile, ngokuvamile kufihlwe noma isofthiwe yayo, noma ibhethri ezimbi. Kwenziwe ongoti uphethwe kungaba cishe ngokushesha ukuhlonza iphutha. Namuhla eziningi izinkampani ukunikela-level omuhle kakhulu inkonzo, lapho ukuhamba okungenzeka uchwepheshe ngqo ekhaya.
Uma "apula" choma
Manje ake sibheke enye inkinga evamile ku-iPad. Ngokuvamile, ngemva ngokucindezela ikhi isiqalo uhlelo iOS iqala umsebenzi wayo angabacwasi ngokushesha. Kodwa kuthiwani uma phambi kwakho iminithi, ezintathu, ezinhlanu, amabili yabukela black screen? Endabeni engcono, umshini ingena kabusha, khona-ke inkinga okuphindaphindiwe. Ngokuvamile lokhu iphutha iyinhlangano nature kohlelo. Ngokuvamile, le nkinga - phetho kabi ezivezwa agqoke isofthiwe. Okuningi kuyaqabukela kungenzeka ukuchaza sengozini inguqulo yamanje ye-iOS. Ngokuvamile ezimweni ezinjalo ukuze ukungasebenzi ngempela ukuphatha yena. Ukuze wenze lokhu, ukuxhuma igajethi kukhompyutha, vula iTunes futhi ukuhumusha iPad e imodi DFU. Khona-ke ungakwazi buyisela futhi ukusebenza evamile. Nokho, uma indaba efanayo sekukhona ngokushesha ngemva firmware ayilungile, bese uthwala iPad sesevisi. Master kabusha ukukhiqiza le nqubo, futhi umphumela waba ukuthi zonke izimbungulu kuyomelwe baye bebodwa. Nokho, kwezinye izimo, noma i-software yokuvuselela noma jailbreak engalethi neminye imiphumela. Pho kuthé iPad? Kulokhu, kufanele ukhulume ukwehluleka hardware. Uma e igajethi ngokusebenzisa isixhumi wet noma ngenkathi ishaja kusukela amapayipi kwakukhona abukhali amandla yokwanda, akufanele kusimangaze ukuthi phezu iPad umyalezo wehluleka noma ngokuzumayo yalo ivuthe umlilo apula.
Sonia Dolganova: Biography nemisebenzi